ယောက်ျား တွေ သဘောကျတဲ့ ရင်သားပုံစံဆိုတာ
May 28, 2018 By Buzz Myanmar News in အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ Tags: တက္ကသိုလ်, ရင်သား, ယောက်ျား
အကြီးလား? အသေးလား? လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလား? အမျိုးသမီး တွေရဲ့ ရင်သား အလှဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ဘယ်လိုရင်သားပုံစံမျိုးကိုမှ အမျိုးသားတွေက ပိုပြီးသဘောကျနှစ်သက်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သုတေသနတစ်ခုက ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တုန်းကတော့ အမျိုးသားတွေဟာ ရင်သားကြီးတဲ့ အမျိုးသမီး တွေကို ပိုပြီးသဘောကျတယ်လို့ မှတ်ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလေ့လာဆန်းစစ်မှုအရတော့ အမျိုးသား တွေအကြိုက် ရင်သားပုံစံဆိုတာ ယခင်က မှတ်ထင်သလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
Prague’s Charles တက္ကသိုလ် က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ ခပ်ထွားထွား ကြီးမားတဲ့ ရင်သားတွေထက် တင်းရင်းတဲ့ရင်သားတွေကိုသာ ပိုပြီးနှစ်သက်သဘောကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိပြီး တင်းရင်းတဲ့ ရင်သားတွေကသာ သူတို့ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံလေးနိုင်ငံက အမျိုးသားတွေက ပြောပါတယ်။ Prague’s Charles တက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသီတွေဟာ ဘရာဇီး၊ ကင်မရွန်း၊ ချက်ဇ်နဲ့ နမ်မီဘီးယားနိုင်ငံက အမျိုးသား ၂၆၇ ဦးကို အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပြပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်သားကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း အားသာချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သန္ဓေအောင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားတာပါ။ ဒီသုတေသနရဲ့ ရလဒ်အကြောင်းကိုတော့ Evolution and Human Behaviour ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယောကျြားတှေ သဘောကတြဲ့ ရငျသားပုံစံဆိုတာ
အကွီးလား? အသေးလား? လုံးလုံးဝိုငျးဝိုငျးလား?အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရငျသားအလှဟာ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျဖွဈတဲ့ အမြိုးသားတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့အရာပါ။ ဘယျလိုရငျသားပုံစံမြိုးကိုမှ အမြိုးသားတှကေ ပိုပွီးသဘောကနြှဈသကျသလဲ ဆိုတာကိုတော့ သုတသေနတဈခုက ဖျောထုတျခဲ့ပါတယျ။ ယခငျတုနျးကတော့ အမြိုးသားတှဟော ရငျသားကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ပိုပွီးသဘောကတြယျလို့ မှတျထငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလလေ့ာဆနျးစဈမှုအရတော့ အမြိုးသားတှအေကွိုကျ ရငျသားပုံစံဆိုတာ ယခငျက မှတျထငျသလိုမဟုတျခဲ့ပါဘူး။
Prague’s Charles တက်ကသိုလျက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ စဈတမျးကောကျယူမှုအရ အမြိုးသားတှဟော အမြိုးသမီးတှမှောရှိတဲ့ ခပျထှားထှား ကွီးမားတဲ့ ရငျသားတှထေကျ တငျးရငျးတဲ့ရငျသားတှကေိုသာ ပိုပွီးနှဈသကျသဘောကတြယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပုံမှနျအရှယျအစားရှိပွီး တငျးရငျးတဲ့ ရငျသားတှကေသာ သူတို့ကိုပိုပွီး ဆှဲဆောငျနိုငျတယျလို့ နိုငျငံလေးနိုငျငံက အမြိုးသားတှကေ ပွောပါတယျ။ Prague’s Charles တက်ကသိုလျရဲ့ သုတသေီတှဟော ဘရာဇီး၊ ကငျမရှနျး၊ ခကျြဇျနဲ့ နမျမီဘီးယားနိုငျငံက အမြိုးသား ၂၆၇ ဦးကို အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရငျသားတှကေိုရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံတှပွေပွီး စဈတမျးကောကျယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရငျသားကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှောလညျး အားသာခကျြတဈခု ရှိပါတယျ။ သန်ဓအေောငျနိုငျစှမျး မွငျ့မားတာပါ။ ဒီသုတသေနရဲ့ ရလဒျအကွောငျးကိုတော့ Evolution and Human Behaviour ဂြာနယျမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။